Inkcazo yeNgqungquthela ngesiNgesi ngegrama
Ngegrama yesiNgesi , isilungiselelo sizwi elibonisa ubudlelwane phakathi kwebizo okanye isigamagama kunye namanye amagama kwisivakalisi. Iziphakamiso ngamagama afana ngaphakathi naphandle , ngasentla nangaphantsi , kwaye nakwii , kwaye ngamazwi esisebenzisa ngawo onke amaxesha.
Ngaba luncedo kangakanani iziphakamiso? Khawubheke nje ukuba zininzi iziphambili eziye zenziwe ngolu hlobo kwisigwebo esilula kwi-WebBollotte ye-EB White: "" Kwiintsuku zokuqala zobomi bakhe, uWilbur wavunyelwa ukuba ahlale kwibhokisi kufuphi nesitofu ekhitshini. "
Iziphakamiso ngenye yezona zinto ezisisiseko zokuthetha kwaye ziphakathi kwamagama esisebenzisa kakhulu xa senza izivakalisi. Kwakhona ilungu leklasi yegama elivaliweyo , elithetha ukuba akunqabile kakhulu ukuba kufakwe ilungu elitsha lokufaka ulwimi. Enyanisweni, kukho i-100 kuphela yesiNgesi.
Iziphakamiso zisoloko zibhekisela kwingingqi (" phantsi kwetafile"), isikhokelo (" ukuya ngasezantsi"), okanye ixesha (" elidlulileyo phakathi kwamabili"). Zingasetyenziselwa ukudlulisa olunye ulwalamano: i-arhente ( nge ); ukuthelekisa ( njengaye, njenge-efana ); ilifa ( le ); injongo ( ngenxa ); umthombo ( ukusuka, ngaphandle ).
Iimboniselo ezininzi zenziwe ngegama elilodwa kuphela kwaye zibizwa ngokuba zizinto ezilula. Ezi ziquka amagama amfutshane kunye anesigqirha njengokuba, nge, nge, nangaphezulu . Usebenzisa kwakhona iziphakamiso ezinje malunga, phakathi, ukuya, kufana, ukuqala, ukusuka, kunokuba, nangaphakathi , ngaphakathi, nangaphandle ukubonisa ubudlelwane phakathi kwamagama.
Kukho ezininzi izihlandlo apho ungadibanisa iziphakamiso. Umzekelo, ngamanye amaxesha kunzima ukwazi xa kufuneka usebenzise ngaphakathi, ukungena, okanye , okanye . Oku kungenxa yokuba zabo intsingiselo zifana kakhulu, ngoko kufuneka ukhangele umongo wesivakalisi.
Zininzi iziphakamiso zineendlela ezichasene nazo. Ngokomzekelo, ungasebenzisa ngaphambi okanye emva, ngaphakathi okanye ngaphandle, ukhupha okanye ngaphaya, ngaphaya okanye ngaphantsi, kwaye phezulu okanye ngaphantsi .
Iimpawu ezimbalwa zeengxelo zibonisa ubudlelwane bezinto kwindawo. Imizekelo yalezi ziquka ngaphakathi, ngapha nangapha, phakathi, ngapha nangapha, ngasemva, ngasemva, ngaphantsi, ngasecaleni, ngaphaya, ngasentla, ngaphaya, ngapha nangapha .
Iipropathi zingaphinde zibhekise kwixesha. Phakathi kwezona ziqhelekileyo zilandelayo , ngaphambi, ngexesha, kude, kwaye kude kube.
Ezinye iziphakamiso zisebenzisekileyo okanye zingasetyenziswa ngeendlela ezininzi. Ezinye zazo ziquka malunga, ngokuchasene, kunye, nangona kunjalo, ngokubhekiselele kuyo, ngokubhekiselele, ngokungafaniyo.
Ukongeza kwiziphakamiso ezilula, amaqela amagama amaninzi angenza umsebenzi ofanayo wograma. Ezi zibizwa ngokuba ziimpawu eziyinkimbinkimbi . Ziyiyunithi ezimbini okanye ezintathu zegama ezidibanisa enye okanye ezimbini iziphakamiso ezilula kunye negama.
Kuloluhlu, unamagama afana nokungezelela kunye nokunye . Nanini na xa uthetha ukubonga okanye phakathi , usebenzisa i-preposition complex.
Ukuchonga iiNgcaciso zangaphambili
Iziphakamiso azikho umkhuba wokuma wodwa. Iqela legama elinesilathiso ekhanda elilandelwa yinto (okanye ukuzalisa) libizwa ngokuthi ibinzana eliphambili . Into ebhengezwayo ngokuqhelekileyo ibinzana okanye isigama-magama: Gus ubeka ihashe ngaphambi kwenqwelo.
Iibinzana zangaphambili zifaka intsikelelo kwizibizo kunye nezenzi kwisigwebo .
Ngokuqhelekileyo basitshela ukuba, phi, nini, nokuba njani kunye namagama ebinzana eliphambi kwexesha eliqhelekileyo linokuphinda lihlelwe kwakhona .
Ibinzana elisengaphambili liyakwenza umsebenzi wesipelisi kwaye liguqule igama: Umfundi emgceni wecala waqalisa ukukhwaza ngokukhawuleza. Inokuthi isebenze njengesibhengezo kwaye isitshintshe isenzi: U-Buster walala ngexesha leklasi.
Ukufunda ukuchonga ibinzana eliphambi kwexesha eliqhelekileyo lidla ngokuba ngumcimbi wokusebenza. Emva kancinane, uya kuqonda ukuba sihlala sincike kangakanani kubo.
Ukuphelisa Isivakalisi Sokumisela
Usenokuba uvile "umgaqo" ongeke uwuphelise isigwebo ngesibonakaliso . Le ngenye yezo "mithetho" ongeke uyenze. Isekelwe kwi-etymology ye "isikhundla sokuqala ," ukusuka kwisiGrike ukuba "ubeke phambili," kunye nesifananiso esinyani kwiLatini.
Kwakudala ngowe-1926, uFenry Fowler wagxotha umgaqo malunga " nesilungiselelo sokuqhawula " njengento "inkolelo enqwenelekayo" engayihoywa ngabalobi abakhulu baseShakespeare ukuya eThackeray.
Enyanisweni, kwi-"Dictionnaire of Modern English Usage" wathi, "inkululeko ephawulekayo efunyanwa yiNgesi ngokubeka izibhengezo zayo ngokukhawuleza kwaye ukushiya izihlobo zayo kuyinto ebalulekileyo ekuguqulekeni kolwimi."
Okubalulekileyo, ungayigatya le migaqo kwaye unokuyichaza iFowler kunoma ubani onitshoyo ngenye indlela. Qhubeka kwaye ugqibe isigwebo sakho ngesilungiselelo ukuba ufuna.
Iziphakamiso eziSebenza njengeNxalenye yeNtetho
Kungenxa yokuba ubona enye yeziphakamiso esiye sichaza zisetyenzisiweyo, asithethi ukuba zisetyenziselwa njengento ebhengeziweyo. Kuya kuxhomekeka kwiimeko kwaye le ngenye yezo ndawo ezikhohlisayo zolwimi lwesiNgesi, ngoko ungavumeli ezi zikhohlisayo.
Ezinye iziphakamiso ( emva, njengokuba, ngaphambili, ukususela, de ) zikhonza njengezihlanganisi eziphantsi xa zilandelwa isigatya :
Kungcono uphume ngaphandle kwedolophu ngaphambi kwelanga. ( Ngaphambi kokuba isetyenziswe njengesilungiselelo.)
Abantu abaninzi baphumelele kwiingcamango ngaphambi kokuba baphume kwamagama. ( Ngaphambi kokuba isetyenziswe njengombambiswano.)
Ezinye iziphakamiso (kubandakanya malunga, ngaphesheya, ngapha nangaphambili, ngaphantsi, phantsi, ngaphakathi, ngaphandle, nangaphezulu ) kwakhona ukukhanya kwenyanga njengezihlomelo. Ngamanye amaxesha kuthiwa izibhengezo zangaphambili okanye iziqulatho zezibhengezo.
UBhete wahamba waya kwindlela. (I-preposition up ilandelwa yinto.)
Bhete wajonga phezulu . (Isibhengezo sokuqala esiphezulu sitshintsha isenzi esabonakala. )
Iziphakamiso ezitshintshileyo ezithatha ifomu efanayo -ukuthatha inxaxheba okanye -inxaxheba ezibizwa ngokuba yi- deverbal prepositions. Kuluhlu oluthile olufutshane, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba ezi ziyiziphakamiso.
> I-Fowler H. I-Dictionary ye-Modern English Usage. Wesi-2. ENew York, NY: i-Oxford University Press; 1965.
Ikomidi elisisigxina (igrama)
I-House Syle (Ukuhlela)
Ithini Ingxaki Yobomi?
Ziziphi iindawo ezi-7 kwaye zifana ne-7th chord?
Indlela yokongeza i-Windshield Washer Fluid kwi-Vehicle yakho
Ndingayithenga phi iikhangiti ze-Premier League?
I-Charleston Shooting kunye neNgxaki yoBukhulu boBugcisa
Indlela Yokuhlela Iifayile Zakho Zokuzalwa
I-College College Scholarships
INzululwazi Yeendlela Ezibuhlungu Ngayo
Isimemezelo Sosuku Lomama (1870)